Isniintii, September 24, 2012 Isniintii, September 24, 2012 Douglas Karr
Xayeysiisyada hodanka ah waxay helayaan hawlgal aad u sarreeya, laakiin way adag yihiin in la abuuro. Flash kuma shaqeeyo mobilka, HTML5-na si joogto ah ugama shaqeyso biraawsar kasta. Maanta, SteelHouse waxay billowday A2 (oo loo yaqaanno laba jibbaaran), taas oo keeneysa tayada sare ee noocyadu ay ka filayaan dhexdhexaadiyeyaasha kale sida TV-ga iyo daabacaadda, xayeysiisyada khadka tooska ah ee loogu adeego aalad kasta oo ay ku jiraan Mac, PC, iPhone, iPad iyo aaladaha Android. Haddii ay rabaan inay qirtaan iyo haddii kaleba, magacyadu way ka xishoodaan kuwa
Wargeysyadu Way Sii Wadayaan Inay Si Aan Baahnayn Isdilaan
Monday, June 9, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Iyada oo loo marayo barta blog-ka, waxaan hadda dhammeeyey akhrinta qayb New York Times ah oo ku saabsan qorshaynta Tribune si aan uga jaro 500 bog oo ka socda 12 ka mid ah wargeysyadooda ugu waaweyn toddobaad kasta. Wargeysyada = Warqadda Musqusha xitaa kuuma sheegi karo sida waallida ah ee tani iiga dhigtay… iyo, macaamiil ahaan, waa inaad sidoo kale aad u xanaaqdaa. Waxay u muuqataa in Warshadaha Wargeysku, xigmaddiisa aan dhammaadka lahayn, ay hadda raacayaan waddada warshadaha waraaqda musqusha